Shan caqabadood oo ku gedaaman heshiiska Galmudug iyo Ahlusuna. – Puntland Voice
December 8, 2017 10:31 am Views: 184
1. Iskudarka labada Barlamaan oo u baahan sharciyad iyo isku miisaamid beelaha dhexdooda ah. Tusaale ahaan:
– Madaxweyne Xaaf wuxuu u baahanyahay inuu fariisiyo Barlamaankiisa si loo meelmariyo heshiiska, lana badalo dastuurka Galmudug si loo kordhiyo tirada Barlamaanka Galmudug, loona abuuro xilka Madaxa Xukuumada. Taas oo caqabadeeda leh marxalada hada lagu jiro.
– Madaxweyne Shaakir wuxuu u baahanyahay in uu Barlamaankiisa ka gado in la isku dheelitiro xubnaha cusub ee kamid noqon doona Barlamaanka Galmudug si loo waafajiyo shuruuda ah in ay ka kala yimaadaan 11 beelood ee Galmudug wada dhisatay. Taas oo cabad uu kala kulmi doono maadaaba markii hore aan nidaamkaas lagu soo xulin Barlamaankiisa.
2. Xilka Madaxa Xukuumada oo ah xil cusub oo aan ku qorneyn dastuurka Galmudug. Lana aqoonin awoodiisa maamul iyo tan siyaasadeed ee uu yeelan doono. Una eg kala qaybin awoodii Madaxweynaha, taas oo ay suurtagal tahay in ay sababto isku dhac iyo loolan dhanka awoodaha ah oo ka dhex dhasha Madaxweyne Xaaf iyo Shaakir.
3. Ahlusuna oo ciidamadeeda haysan doonto inta laga gaarayo isku dhafka ciidamada. Taas oo micnaheedu yahay inay jiri doonaan labo awood ciidan oo aan kala amar qaadan oo hal magaalo wada joogo. Taas oo abuuri karta cabsi ah in ciidamadaasi ay qeyb ka noqon karaan khilaafyada siyaasadeed ee maamulka cusub ka dhex dhalan kara.
4. Siyaasiinta iyo shaqsiyaadka hada horboodaya heshiiska oo culeys ku noqon kara fulitaanka heshiiska hadii aysan fulin balanqaadyo heer federaal ah oo la socday heshiiskaan.
5. Siyaasiin iyo beelo mug siyaasadeed ku leh Galmudug oo qorshaha hada socda aan qeyb ka ahayn, ayna suurtagal tahay hadii dantooda ay ka dhex arki waayaan waxa socda inay caqabado cusub u abuuraan taabagelinta heshiiskaan.
Talo ahaan waxaan qabaa in laga shaqeeyo sidii heshiiskaan u mira dhali lahaa. Madaxda Galmudug iyo Ahlusuna waxaan usoo jeedinayaa inay talo wadaag la noqdaan qaybaha kale ee talada iyo shaqadu kala dhaxeyso si loo gaaro yoolka ah in laga mira dhaliyo heshiiskaan.